Mpanoratra asongadina : Maryna Reshetnyak · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2018 3:01 GMT
Amin'ny maha-toniandahatsoratry ny fahasalamana ato amin'ny Global Voices amin'ny fiteny Rosiana azy dia nandany ny ankamaroan'ny fotoanany nitantarana ny tetikasa notohanan'ny Rising Voices ao Kiev, The Drop-In Center. i Maryna Reshetnyak. Nibilaogy tato amin'ny Global Voices ihany koa izy momba ny adihevitra hita tao amin'ny tontolon'ny bilaogy amin'ny teny Rosiana mifandraika amin'ny fahasalamana, izay momba ny sahotaka tamin'ny gripan-kisoa tao Okraina. Namariparitra ny fihaonany voalohany tamin'ny mpikarakara ny Rising Voices, Pavel Kutsev izy ato amin'ity horonantsary ity, ary nampahatsiahy fa mpianatra nahazo diplaoma tao Delaware, Etazonia.
Izaho no Maryna Reshetnyak ary monina ao Odessa, Okraina aho.
David: Ary inona no ataonao ao amin'ny Global Voices?
Maryna: Toniandahatsoratry ny fahasalamana amin'ny fiteny Rosiana ho an'ny tetikasa Rising Voices aho. Amin'ny ankapobeny dia mitantara ny tetikasa Drop-In Center aho. Manambatra ny vondron'olona izay mpitarika ao amin'ny hetsika fampihenana ny loza ao Okraina ity tetikasa ity . Miaina anaty fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina izy ireo. Manaraka fitsaboana izy ireo ka noho izany mba hiainany ara-dalàna dia mila mandray methadone izy ireo isan'andro. Ary mibilaogy momba izany izy ireo. Mibilaogy momba ny olana atrehiny. Ary raha ny marina, ny bilaogy dia manampy azy ireo hanery sy hisoloana vava manoloana ireo manampahefana misahana ny fahasalamana ao amin'ny governemanta ary mitantara izany tetikasa izany aho.
David: Androany, sambany vao nihaona tamin'i Pavel avy ao amin'ny Centre Drop-In ianao … ity bilaogy ity izay efa nandikanao teny nandritra ny herintaona izao, sa tsy izany? Toy ny ahoana ny mihaona mivantana amin'ny olona voalohany taorian'ny nahitanao azy an-tserasera?
Maryna: Nahagaga fa rehefa nihaona taminy aho, dia nihaona tamin'ilay olona nantenaiko hihaonana. Toa ny famakiana ny zava-drehetra nosoratany no namela ahy hahafantatra azy tsara. Toy ny hoe nihaona tamin'ny namana tranainy iray aho. Nonina roa taona tany Etazonia tany Amerika aho, tamin'ny fanomanako ny Master momba ny Raharaham-panjakana tao amin'ny Oniversiten'i Delaware. Noho izany dia nonina roa taona tao amin'ity toerana mahafinaritra an'i Delaware ity aho izay tsaroako loatra. Nandany telo volana ihany koa aho nanao ny fianarana asako tany Washington DC Ary tiako ihany koa ity toerana ity.
David: Raha niaina tany Amerika ary ianao noho izany dia inona ny zavatra tsapan'ireo Amerikana momba an'i Okraina?
Maryna: Tsapan'izy ireo fa tena mangatsiaka be ao Okraina. Tsy fantatro ny antony, fa ny olona rehetra dia mihevitra fa tena mangatsiaka.
David: Mangatsiaka be!
Maryna: Olona iray tena nahita fianarana … nanontany ahy indray mandeha raha toa ka mahatsiaro ny hazavana any avaratra aho. Toy ny hoe, tsia. Mipetraka ao Odessa aho. Tena mafana ny ao ary manana tora-pasika tsara tarehy izahay. Eny, ny hany zavatra tokana fantatr'izy ireo momba an'i Okraina dia ny hatsiaka be saingy nanao izay afako aho mba hanazavana tamin'izy ireo fa firenena mahafinaritra manana kolontsaina maro ihany koa i Okraina .
David: Ahoana ny fahitanao ny Global Voices?
Maryna: Eny, tetikasa mahafinaritra izy. Tena mahafinaritra tokoa ny mahatsapa tena ho tafiditra ao anatin'ny tambajotra misy olona miisa 200 mahery manerana izao tontolo izao izay manao asa mitovy. Ary tena afa-mirehareha tokoa aho fa tafiditra ao anatin'izany ekipa izany. Tena zava-dehibe ho ahy izany.